विवाहपछि आदित्य नारायणले श्रीमती श्वेतालाई दिए धम्की !
प्रकाशित २०७७ मङ्सिर २१ आइतबार
काठमाडौं । गायक उदित नारायणका छोरा बलिउड गायक आदित्य नारायण र श्वेता अग्रवालले हालै विवाह गरेका छन् । उनीहरु आफ्नो विवाहित जीवनको आनन्द लिइरहेका छन्। १ डिसेम्बरमा, परिवारका सदस्यहरू बीच दुबैको विवाह भएको थियो । अब श्वेताको एक भिडियो भाइरल भइरहेको छ जसमा उनले विवाह पश्चात विधीहरू गरेकी छिन। भिडियोमा श्वेता आफ्नो सासु दीपा नारायणसँग केहि बनाउँदैछिन्।
आदित्य सो अवसरमा श्वेतासँग रमाइलो धम्की दिदै भन्छन - कुनै पनि कसर छोड्नु हुँदैन अन्यथा जाउ आफ्नो माइतिमा । जब उनले सबै ठिकठाक गरिन् उनले कुरा सच्याउदै घरमा बस्न भने । आदित्यको कुरा सुनेपछि श्वेताले हाँसो रोक्न सकिनन्।
आदित्य श्वेतासँग विवाह गरेपछि धेरै खुसी छन्। उनका अनुसार श्वेतासँग बिहे गर्नु सपना साकार भएको जस्तो छ। आदित्यले श्वेतालाई विवाह गर्नु अघि ११ बर्षसम्म डेट गरेका थिए । आदित्यले भनेका छन्, 'श्वेता र मैले विवाह गर्‍यौ, यो सपना जस्तो लाग्छ। यो सपना जस्तो हो जुन सत्य भयो। म मेरो जीवन श्वेता बाहेक अरु कसैसँग बिताउने सोच्न सक्दिन।'
विवाहको समय आदित्य नारायणको पाइजामा च्यातिएको थियो, उनले आफ्नो साथीको सहयोग लिनु परेको थियो। स्पटबोयसँगको अन्तर्वार्ताको बेला, आदित्यलाई सोधिएको थियो विवाहको समयमा तपाईंको सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षण कुन हो? यसको जवाफमा उनले भने, 'मैले मेरो साथीको पाइजामामा लगाउनु परेको थियो। जब श्वेतालाई मालामा लगाउनका मलाई उठाइयो मेरो पाइजामा च्यातिएको थियो । यस्तो अवस्थामा मैले एक साथीलाई उसको पाइजामा माग्नु परेको थियो । धन्न , मेरो साथी र म उचाई समान छ।'
एनसेल एपको नयाँ संस्करण सार्वजनिक, ग्राहकका लागि आकर्षक थप सुविधाहरू
एनसेलले ल्यायो भारत कल गर्न सुलभ दरका भ्वाइस प्याकहरू
एनसेलले रिङ रोडको १०.२ किलोमिटर सडकखण्डमा हरियाली निर्माण तथा संरक्षण गर्दै